Ekhabar24 कान्तिमा एकै दिन ५ बालबालिकामा कोरोना संक्रमण पुष्टि - Ekhabar24
कान्तिमा एकै दिन ५ बालबालिकामा कोरोना संक्रमण पुष्टि
काठमाडौंः कान्ति बाल अस्पतालमा आज एकै दिन पाँचजना बालबालिकामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ । आज पत्ता लागेकासँगै नयाँ भेरियन्टसहित कोभिड–१९ का बिरामी बालबालिकाको सङ्ख्या १० पुगेको अस्पतालले जनाएको छ ।
गत वर्षभन्दा यो वर्ष संक्रमण फैलिने दर उच्च भएकाले संक्रमित थपिरहेको अस्पतालले जनाएको छ । एक सातायता दिनमा एकदुईजनामा संक्रमण देखिएकामा आज एकै दिन बढी सङ्ख्या देखिएको अस्पतालका प्रवक्ता डा. कृष्णप्रसाद विष्टले बताएका छन्।
कोभिडकै उपचारका लागि तोकिएको अस्पताल नभएकाले अरू स्वास्थ्य समस्या लिएर आएका बिरामीको परीक्षण गर्दा कोभिड पाइएको अस्पतालले जनाएको छ । रुघा, खोकी, ज्वरो, निमोनिया भएर आएका ती बालबालिकामा परीक्षण गर्दा सङ्क्रमण पुष्टि भएको प्रवक्ता डा. विष्टले बताएका छन्।
अस्पतालले कुनै पनि बालबालिका अस्पताल छिर्नासाथ ज्वरो हेर्न ‘फिबर क्लिनिक’ को व्यवस्था गरेको छ । कोभिडसँग मिल्दो लक्षण भएका शङ्कास्पद बिरामीलाई छुट्टै वार्डमा राखिने गरिएको प्रवक्ता डा. विष्टले जानकारी दिएका छन्। बालबालिकाको रिपोर्ट पोजेटिभ भएमा कोभिडका लागि छुट्याइएको सैय्यामा उपचार गरिन्छ । संक्रमण नभएको पाइएमा अरू सामान्य सैय्यामा उपचार गरिने अस्पतालले बताएको छ ।